ပေကျင်း-ဝူဟန့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲမှု စတင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန့်မြို့ရှိ ပေကျင်း-ကွမ်ကျိုး မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ ပေကျင်း-ဝူဟန့် ရထားလမ်းပိုင်းပေါ်တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတစ်စင်းအား ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝူဟန့် ၊ ဇွန် ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် မြို့တော် ဝူဟန့်မြို့ နှင့် ပေကျင်းမြို့အား ဆက်သွယ်ထားသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်းသည် ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၃၅၀ အမြန်နှုန်းဖြင့် ပုံမှန်ပြေးဆွဲမှုစတင်ခဲ့ကြောင်း China State Railway Group ကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန့်မြို့ရှိ ပေကျင်း-ကွမ်ကျိုး မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ ပေကျင်း-ဝူဟန့် ရထားလမ်းပိုင်းပေါ်တွင် ဝူဟန့်ရထားဘူတာရုံမှ ထွက်ခွာလာသည့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတစ်စင်းအား ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရထားအမြန်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၃၁၀ နှုန်းမှ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ရထားလမ်းပိုင်း၏ အလုံးစုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပမာဏသည်၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း နှင့် ပေကျင်းမြို့ နှင့် ဝူဟန့်မြို့အကြား ခရီးစဉ်အား သုံးနာရီ နှင့် ၄၈ မိနစ်သို့ လျှော့ချခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။ (Xinhua)
InPics: Beijing-Wuhan high-speed rail starts operation at 350 km/h
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-20 16:44:14
WUHAN, June 20 (Xinhua) — A high-speed rail linking Beijing with Wuhan, the capital of central China’s Hubei Province, starts normal operation ataspeed of 350 km/h on Monday, said the China State Railway Group Co., Ltd.
Photo 1 – A high-speed train runs on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo2– A high-speed train departs from Wuhan Railway Station on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo3– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo4– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo5– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo6– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo7– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo 8 – Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo9– Aerial photo showsahigh-speed train running on the Beijing-Wuhan section of the Beijing-Guangzhou High-speed Railway in Wuhan, central China’s Hubei Province, June 20, 2022. (Xinhua/Xiao Yijiu)■